Madaxweynaha Yugandha oo si kulul uga hadlay xildhibaan lagu dilay Kampala – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Yugandha oo si kulul uga hadlay xildhibaan lagu dilay Kampala
Wararka ka imaanaya dalka Yugandha ayaa sheegaya in la dilay xildhiban ka tirsan baarlamaanka dalkaasi,taasi oo dhalisay caro xoogan oo ah dibadbadxyo ay dhigayaan shacabka.
Ciidamada amaanka deegaanka Arua ee waqooyiga Uganda ayaa siweyn u adkeeyey amniga ka dib markii Jimcihii halkaasi lagu dilay xildhibaan caan ah oo baarlamaanka dalkasi ka tirsan,waxaana wararku ay sheegayaan in uu kamid ahaa xubnaha sida aadka ah ugu dhawaa madaxweyne Yuweri Museveniga dalkaasi.
Shacab farabadan oo ah Taageerayaasha Ibrahim Abiriga ayaa burburiyay hanti islamarkana isku dayay in ay weeraraan saldhig booliisk,waxaana lafilayaa in Madaxwayne Yoweri Museveni uu ka qaybgalo aaska Mr Abiriga maanta Isniin ah.
Boqolaal dhalinyaro ah ayaa isugu soo baxay garoonka magaalada Arua ee waqooyiga Uganda si ay u soo dhaweeyaan maydka xildhibaankii deegaankaasi Ibrahim Abiriga,Waxaana uu ka mid ahaa dadka sida wayn u taageera madaxwayne Yoweri Museveni.
Mr Abiriga iyo askarigii ilaalinayay ayaa lagu toogtay habeenkii Jimciha guriga xildhibaanka oo Kampala ku yaalla, Madaxwayne Yoweri Museveni ayaa balanqaaday in uu xoojin doono dadaalka lagaga hortagayo dambiyada,
Sida ay sheegeen booliiska dalkaasi dad isu soo baxay ayaa ku dibadbaxay ilaalada xildhibaanada waxa ayna isku dayeen in ay weeraraaan saldhiga ugu wayn booliiska magaaladaasi.
Booliiska ayaa isticmaalay suntan dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas si ay dibadbaxayaasha u kala ceyriyaan.
Saxafiyiinta ayaa sheegaya in dadka xildhibaanka u baroor diiqayay ay ka careysnaayeen in dowladda aysan difaacin hogaamiyahooda.
Dalka Yugandha ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxaa ku soo kordhayay dilal qorsheysan oo loo geysanayo dadka waxtarka u leh bulshada iyo afduubyo,inkastoo ay socdaan isku dayo la doonayo in looga hortago falalkaasi amni dari.